भारतका ७ राज्यमा फेरि ‘नोटबन्दी’ ! २ हजारका नोट बजारबाटै हराए - pnpkhabar.com
You are at:Home»विश्व»भारतका ७ राज्यमा फेरि ‘नोटबन्दी’ ! २ हजारका नोट बजारबाटै हराए
भारतका ७ राज्यमा फेरि ‘नोटबन्दी’ ! २ हजारका नोट बजारबाटै हराए
By पूजा बानियाँ on ४ बैशाख २०७५, मंगलवार ०६:३७ विश्व
एजेन्सी। भारतको उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, तेलंगना, झारखण्ड, महाराष्ट्र र मध्य प्रदेशमा नोटबन्दीको अवस्था आएको छ । दिल्ली, गुडगाँव, भोपाल, पटना, लखनउ, हैदराबाद र अहमदाबादलगायतका ठूला शहरका साथै अन्य क्षेत्रबाट नगद अभावको गुनासो बढिरहेको छ । यहाँका एटीएम मेसिनमा नगद नभएको गुनासो अत्याधिक छ । समस्या अत्याधिक बढेपछि केन्द्र सरकारले रिजर्व बैंक अफ इण्डियासँग मिलेर काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ । बैंकका अधिकारीका अनुसार केन्द्रीय बैंकबाट नगद प्रवाह नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
पछिल्लो हप्तादेखि नगद अभावको गुनासो बढिरहेको छ । गुनासोले चर्चा त्यतिबेला पायो जब मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले बजारबाट दुई हजारका नोट गायब भइरहेको बताए । उनले यसको पछाडि षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन् । समस्या २ हजारको नोटको हो । बैंक अधिकारीका अनुसार २ हजारका नोट मानिसहरुले बजारमा नचलाइ आफैंसँग सुरक्षित राख्न थालेका छन् । यही कारण अभाव बढिरहेको छ । नोटबन्दीका क्रममा ५ सय र हजारका नोट बन्द गरेर केन्द्रीय बैंकले २ हजारको नोट जारी गरेको थियो ।
समाचार एजेन्सी एएनआइका अनुसार हैदराबादका एटिएममा पैसा नै छैन । बिहार झारखण्डमा बैंकमा रहेको नगदमा ८० प्रतिशतले कमी आएको छ । यहाँका बैंकमा १२ हजार करोड नगद रहने गरेकोमा अहिले अढाइ हजार करोड मात्र छ । बैंकमा रहेको कूल नगदमा २ हजारका नोटको अनुपात १० प्रतिशत मात्र छ । सामान्य अवस्थामा बैंकमा भएको कूल नगदको आधा परिमाण २ हजारका नोटको हुन्थ्यो । गुजरातमा बैंकले नगद निकाल्ने सीमा तोकेका छन् । तोकिएको सीमाभन्दा बढी नगद निकाल्न पाइँदैन । एटिएम मेसिनहरु रित्तै छन् । रित्ता एटिएम र बैंकबाट भनेजति रकम निकाल्न नपाउँदा उपभोक्ता निकै समस्यामा परेका छन् ।